राष्ट्रियसभाको टिकट पाएपछि कोमल वलीले के भनिन् ? (अन्तरवार्ता) – Nepal24News
January 24, 2018 by नेपाल २४न्युज
मैलै राष्ट्रियसभामा सकारात्कम भुमिका निभाउनेछु । यो एउटा पथप्रर्दनको अवसर हो । राष्ट्रिय सभाको माध्यमबाट राष्ट्रियता स्वाधिनता तथा एकताको प्रबर्धन गर्न लाग्नेछु । महिलाहरुको आवाज पनि बुलन्द रुपमा उठाउने छु । महिलाहरुसँग सम्बन्धीत ऐन, नियम तथा विभिन्न विधेयक पारित गर्न मैले भुमिका खेल्नेछु ।
गायन अथवा संगीतले नै मलाई अहिलेको मेरो परिचय दिएको छ । म यहाँसम्म आइपुगेको संगीतको कारणले नै हो । म गायिका भएकै कारण पनि मैले सम्मान पाएको छु । जो पायो त्यसले यो सम्मान पाउन सक्दैन । अब समग्र संगीतको विकास र प्रबद्र्धनको लागि पनि मैले भुमिका निर्वाह गर्ने सोचेकी छु ।
Prev२ गोर्खालीलाई गोली हान्ने प्रहरीलाईनै खुकुरिले छप्पकाईदिए गोर्खालीले हेर्नुहोस भिडियोमा !
Nextश्रीमतीलाइ अरुसंग यौनसम्पर्क गरिरहेको अवस्थामा श्रीमानले भेटेपछी..(भिडियो)